Umhambisi Wezingxenye Ze-elekhthronikhi | IC Components Limited | I-Kudluliselwa Ukudluliselwa kweReed IC Electronic Capacitors Products HE721R1210, buy 9012-12-11, chips PRMA2A05, JWD-107-1 stock, HE3621A0510 online
Ikhaya > Imikhiqizo > Kudluliselwa > Ukudluliselwa kweReed
24 imikhiqizo ehlobene
Ukudluliselwa okuphezulu kwe-Frequency (RF)(16)
Abaxhumanisi (State Solid)(0)
Ukudluliselwa kombuso okuqinile(1,445)
I-Signal Idlulisela, Kufike ku-2 Amps(241)
Amandla adluliselwayo, ngaphezulu kwama-Amps angu-(362)
I-O / O Yokudlulisa Amamojula(0)
I-O / O Amamoduli Wokudlulisa - Ukufakwa(0)
I-O / O Ukudlulisela Amamojula - Analog(0)
I-O Yokudlulisa Module Racks(0)
Incazelo:RELAY REED SPDT 250MA 12V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2670 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED SPST 500MA 12V
Incazelo:RELAY REED DPST 500MA 5V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2700 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:POTTER&BR IGBT Modules
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2863 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED SPST 500MA 5V
Incazelo:RELAY REED SPDT 250MA 5V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2752 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2690 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED 3PST 500MA 12V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2694 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2798 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED SPDT 250MA 24V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2802 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-3600 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED DPST 500MA 24V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2888 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED SPST 1A 5V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2660 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2739 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED SPST 500MA 24V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2672 ama-pcs Stock atholakalayo.
Incazelo:RELAY REED DPST 500MA 12V
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2774 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2870 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-14000 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2783 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2887 ama-pcs Stock atholakalayo.
Kukhona kusitoki:Ukuqala okusha, ama-2811 ama-pcs Stock atholakalayo.